लाहाचोक स्वास्थ्य चौकीको सामाजिक परीक्षण | eAdarsha.com
लाहाचोक स्वास्थ्य चौकीको सामाजिक परीक्षण
हेमजा, १४ जेठ। कास्कीको लाहाचोक स्वास्थ्य चौकीको आव २०७२/०७३ को सामाजिक परीक्षण कार्य मङ्गलबार गरिएको छ।
सामुदायमा आधारित पुनस्र्थापना कार्यक्रम -सिबिआर) कास्कीको आयोजना एवम् जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कास्कीको सहयोगमा उक्त सामाजिक परीक्षण भएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै गाविस स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवम् गाविस सचिव बोधराज सापकोटाले लाहाचोकमा अब जनताकै घरदैलोमा पुगी स्वास्थ्य शिक्षा दिनुपर्ने खाँचो औल्याए। उनले भने-‘गाविसका कतिपय सेवाग्राहीलाई खोप, पोषणा, विभिन्न रोगबारे सामान्य जानकारीसम्म छैन, त्यसका लागि स्वास्थ्य शिक्षा जनताको घरदैलोमा नै पुर्‍याउनु पर्दछ।
अध्यक्ष सापकोटाले स्वास्थ्य चौकीको सेवा, सुविधासम्बन्धमा स्थानीयले अलि बढी चासो लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख केशवराज अधिकारीले जनताको चाहनाबमोजिम स्वास्थ्य चौकी विगतमा दिउँसो तीन बजेसम्म मात्र खोल्ने गरिएकोमा त्यसलाई बढाएर साँझ ५ बजेसम्म खुलाउने प्रतिबद्घता जनाए। अधिकारीले भवन अभावको समस्याको कारण सोचेजति छिटो छरितो सेवा दिन नसकिएको जानकारी राख्दै भवन निर्माणका लागि जग्गाको खोजी भइरहेको पनि बताएका छन्।
नेपाली काँग्रेस लाहाचोकका सभापति मधुसुदन अधिकारीले स्वास्थ्य चौकीमार्फत् जनताले सोचे अनुसारको सेवा पाउन नसकेको बताए। स्वास्थ्य चौकी प्रमुख अधिकारीले प्रायःजसो मादकपदार्थ सेवन गरी आउँदा जनताको विश्वास कम हुँदै गएको उनको दाबी छ।
कार्यक्रममा आशा क्लिनिकका सामाजिक प्रशिक्षक राधा बराल, महेन्द्र उच्च माविका प्राचार्य गोविन्दप्रसाद अधिकारी, वडा नं. ८ का विष्णुप्रसाद पौडेल, वडा नं. ३ की भागिरथी भण्डारी, गगांबहादुर सुनारलगायतले बोलेका थिए। वक्ताहरूले गाविसका महिलामा पाठेघरको समस्या रहेको, स्वास्थ्य चौकीमा भौतिक पूर्वाधार अभाव, कार्यक्रममा जनसहभागिता न्यून भएको, उपस्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य चौकीमा स्तरोन्नति गरिए पनि स्वास्थ्य चौकी बराबरको सेवा, सुविधा नपाएको, गाविस र स्वास्थ्य चौकीमा खानेपानीको प्रबन्ध नभएको, बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा समस्या आएको, चौकीबाट औषधी प्रयाप्त नपाइने, कर्मचारीले सेवा दिन झको मान्ने गरेको, निःशुल्क पाइने औषधीबारे सेवाग्राहीलाई स्पष्ट जानकारी नगराएको, भवन निकै साघुरो भएको, पारदर्शिता कम भएकोलगायतका गुनासो गरेका थिए।
गाविस स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बोधराज सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम सिबिआर पोखराका प्रतिनिधि पत्रकार अमृत सुवेदीले सञ्चालन गरेका थिए।